Hordhaca Flanges Steel
Flange waa qaybta isku xirta tuubada iyo tuubada, oo loo isticmaalo isku xirka dhammaadka tuubada; waxaa sidoo kale loo adeegsadaa flange -ga qalabka ee isku xirka labada aaladood, sida flange -yareeyaha. Xiriirinta flange ama wadajirka flange waxaa loola jeedaa wada -guuri kara ...
Dhoofinta alaabta guriga Hebei saddexda rubuc ee ugu horreeya 2020 waxay gaartay 4.59 bilyan yuan
Wadarta qiimaha wax -soo -saarka warshadaha wax -soo -saarka alaabta guriga ee Gobolka Hebei waxay ku jirtay isbeddel koboc. Laga bilaabo Oktoobar 2020, gobolku wuxuu dhammaystiray wadarta qiimaha wax soo saarka alaabta guriga oo ah 59.6 bilyan yuan, oo ah koror sannad-sannadeed ah oo ah 10.6%. Dhoofinta alaabta guriga ayaa weli ah mid kobac sare leh, ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya Tuubbo Laab iyo xusul.
Farqiga ugu weyn ee iyaga u dhexeeya ayaa ah xusulka oo aad uga gaaban tan qaloocan, R = 1D ilaa 2D waa xusul, In ka badan 2D ayaa laaban. Suxullada Biibbada iyo Biibiilaha Biyuhu labaduba waa badeecooyin ku rakiban tuubooyin kuwaas oo loo isticmaalo in lagu beddelo jihada qulqulka ee nidaamyada dhuumaha. Mararka qaar ...
Ku saabsan ZIFENG
HEBEI ZIFENG CO -NEW TECHNOLOGY CO., LTD. waa shirkad warshadeed oo dhammaystiran, waxaan leenahay badeecooyin aad u ballaaran oo ku takhasusay soo -saarka, soo -dejinta & dhoofinta alaabada tayada sare leh. ZiFeng wuxuu had iyo jeer ku dadaalaa inuu kor u qaado badeecadayada si uu u noqdo hogaamiyaha adduunka ugu ...